Zvekare zvakawedzeredzwa zvichanyangarika kubva kuSafari ye macOS | Ndinobva mac
Panguva ino, Mac ine mugove mudiki wemusika, asi izvi zvinochengetwa nekufamba kwenguva, zvichipesana nezvinoitika neWindows makomputa, anosiya ino sisitimu yemafoni kana mapiritsi. Iyo yakadzikira kune iyo Mac share ndeye kuwanda kwemalware, ikozvino kuti ivo vanogona kutora ruzivo rwakakodzera.
Mupfungwa iyi, masisitimu anoshanda seMacOS akavharwa zvakanyanya sezvinobvira kudzivirira kupinda kwevanopinda. Imwe yemaitiro ekupedzisira anga ari iyo kusiya zvekare zvekare zveSafari, avo vane kuwedzera .safariextz
Isu tinoziva nhau kuburikidza neazvino kuvandudzwa kwe Safari Technology Preview Izvo hazvitsigire nhoroondo yeS Safari yekuwedzera. Nhasi izvi zvinongedzo zvichiri kuwanikwa mu Safari yekuwedzera gallery, asi ivo vachakurumidza kuwanikwa uye havazoshandisike mune ramangwana shanduro dzeSafari. Izvi zvinosimbisa chiziviso chaApple mu 2018 WWDC waifungira kupi kuti izvi zvinowedzera yaisazowanikwa.
Muchokwadi, ivo vanokudziridza Ivo havagone kutumira zvinowedzerwa kubva apfuura Ndira 1. Ndeipi hazvizivikanwe kuti inguvai Kubviswa kwekare kweSafari extensions kuchashanda, kana izvi zvikazoshanda mune inotevera Mojave gadziriso kana ivo vosiira iyo macOS 10.15, neshanduro nyowani yeSafari ichivabvisa.
Apple iri kubvunza vanogadzira kuti vagadzirise yavo yekuwedzera kune iyo nzvimbo yakaunzwa muOS X El CapitanNezvikonzero zvakasiyana siyana: Kuwedzeredzwa kune hukama-neapp munzvimbo yekutanga, asi zvakare kunounza mamwe mabhenefiti senge nyore kuiswa. Muzviitiko zvakawanda, kuwedzera kwacho kunosanganisirwa mukushandisa pachako, kugadzira nyore maitiro uye kupindirana pakati pekushandisa nekuwedzera.
Iyo yekudzikira ndiyo iyo inodiwa kuiswa kwewedzero muMac App Store. Izvi zvinogadzirisa basa revamwe vagadziri avo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana havadi kuitisa kunyorera muchitoro cheApple. Apple inoshanda zvakasiyana kubva kune mamwe mabhurawuza ayo anowedzera kubvumidza kudyidzana kwekuwedzeredzwa kubva kune mamwe masevhisi. Isu tinonzwisisa kuti danho reApple rakavakirwa pane chengetedzo yakapihwa nekuve nekudzora kuwedzerwa mukati mechitoro. Tichaona kuti misika iri kunanga kupi mumwedzi uye makore anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Zvekare zvakawedzeredzwa zvichanyangarika kubva kuSafari kune macOS